Uthotho lwamashwa ayintlekele, isaga eyenziwe nguDaniel Handler. | Uncwadi lwangoku
Uthotho lweentlekele ezimbi
UJuan Ortiz | | Ababhali, iintlobo, Iincwadi, Iincwadi zoLutsha, Inoveli
Uthotho lwamashwa ayintlekele, Isiqalo esibi.
Uthotho lweentlekele ezimbi Luthotho lweencwadi ezenziwe nguDaniel Handler, otyikitya phantsi kwegama elingelolakhe uLemony Snicket. Isihloko sokuqala ngesiNgesi, Uthotho lweziganeko ezingathandekiyo, iguqulela njenge Uthotho lweziganeko ezingathandekiyo. Yenziwe ngaphakathi ezona ncwadi zintle zabantwana nolutsha, ngaphandle komoya omdaka kwaye ongaqondakaliyo wokubaliswa kwayo.
Ifumene uphononongo olulungileyo ukusukela oko kwakukhutshwa isahluko sokuqala ngo-1999., Isiqalo esibi, kwaye ibisoloko ithandwa kakhulu ngabafundi bayo yonke iminyaka. Ngesi sizathu, iphefumlele ifilimu yeNickelodeon enegama elifanayo (2004) (obekade edlala uJim Carrey kwindima ka-Count Olaf) kunye nothotho lweNetflix (2017-2019).
2 Umhlaba uxelelwe nguLimony Snicket
3 Uphuhliso lwesakhiwo sebali kunye nesimbo sokubalisa
3.1 Icebo elibi
3.2 Ingenuity njengesixhobo sokuphila
3.3 Uzwilakhe okrelekrele kakhulu
3.4 Uburharha obumnyama ebusweni
3.5 Impikiswano enzulu
4.1 I-lemony iswitshi
4.2 Mnu Poe
4.3 UViolet Baudelaire
4.4 UKlaus Baudelaire
4.5 Ilanga baudelaire
4.6 Bala u-Olaf
UDaniel Handler ngumbhali wencwadi owazalelwa eSan Francisco, eCalifornia, eUnited States, ngoFebruwari 28, 1970. Ukwagqamile njengemvumi, edlala ikhodiyani kwaye equlunqe amaqela ahlukeneyo, njengeqela leMagnetic Fields, umzekelo. Uye wasebenzisana nophuhliso lwezikripthi zeefilimu ezahlukeneyo zaseHollywood kunye neenkampani ezizimeleyo zemveliso.
Isaga yakhe yeencwadi Uthotho lweentlekele ezimbi uthengise iikopi ezingaphezu kwezigidi ezingama-60 kwihlabathi liphela kwaye iguqulelwe kwiilwimi ezingaphezu kwama-40. Ukongeza, uHandler ukhuphe ezinye izithuba ezinxulumene nombhali-mlinganiswa-umbalisi, uLimony Snicket: Ibhayiloji engagunyaziswanga kunye Yonke imibuzo engalunganga.
Umhlaba uxelelwe nguLimony Snicket
Kwimeko yesinema, Indalo yonke eyenziwe nguDaniel Handler iye yathelekiswa naleyo yenziwa nguTim Burton ukuya Izikere zikaEduardo. Nangona kunjalo, ilizwe elibaliswe nguLimony Snicket libonisa izinto ezithile zentsusa, kunye neemeko ezingenangqondo nezibaxiweyo.
Imekobume ye Uthotho lweentlekele ezimbi Ingachazwa njenge "gothic yasedolophini". Nangona indlu yosapho yaseBaudelaire imi kwisixeko saseBoston, eMassachusetts, iindawo zokwenene azifane zichazwe ezincwadini. Nangona kunjalo, ezinye izingqinisiso ezinokuthenjwa ziyavela; umzekelo, isihloko sombhalo "iTrout, eFrance", echazwe kwisahluko sesithandathu (Elevator Ersatz okanye "Isinyusi esingeyonyani") ngaphakathi kwivenkile ethengisa iincwadi ebizwa ngokuba yiJerome ne-Esmé Squalor.
Ngokunjalo, kukho iindawo zokwenyani zaseMelika ezixutywe nezihloko eziyintsomi. Phakathi kwezi zinto zibalaseleyo kukho "iDuchy yaseWinnipeg" kunye "neKumkani yaseArizona." Enye into enigmatic ligama elithi "VFD", elithi-ngokokuphononongwa okuthile-libhekisele kwinoveli Slapstick nguKurt Vonnegut, ijolise kumgaqo-siseko "wosapho olungelolwenyani" njengonyango lwesithukuthezi.
Oku kubaluleke kakhulu kuba ukuqala kwe- I-saga ibonisa intlekele ejikeleze iinkedama ezintathu (abazalwana baseBaudelaire) kunye no-Count Olaf omnyama, ngubani oba ngumgcini osemthethweni wabantwana. Ibali lahlulwe lazizahluko zilishumi elinesithathu (amanye amagama ahlukile kwinguqulelo yesiNgesi ngqo):
Indawo yokucheba amaplanga.
Isikolo esinzima kakhulu.
Uphuhliso lwesakhiwo sebali kunye nesimbo sokubalisa
Uthotho lweentlekele ezimbi ubalisa amava aphazamisayo eVioleta, eKlaus naseSunny Baudelaire. Emva kokubhubha kwabazali babo emlilweni, amakhwenkwe ashiyeka elugcinweni kwesihlobo - esikrokrelwa ukuba sesona sizathu somlilo wokubulala- u-Count Olaf.
Kwimeko yokuqala, ibonisa indlela umqeqeshi owoyikayo azama ngayo ukweba ilifa elikhulu kubazalwana baseBaudelaire. Emva koko, ngoncedo lwabantu ahamba nabo abadelelekileyo, ubeka iinjongo zobunjineli obungenakulindeleka ukuze alinganise ingozi ebulalayo yabantwana.
Umfanekiso ovela kwinguqulelo yefilimu yoThotho lweeNkxwaleko eziLishwa.
Ingenuity njengesixhobo sokuphila
Njengokuba iziganeko ziqhubeka, abalinganiswa abangenakuzinceda kufuneka basombulule iimfihlakalo eziya zisiba nzima. ezinxulumene nokusinda kwabo. Ukongeza, uthungelwano lwamayelenqe anzulu anxulumene nosapho kunye noluntu olufihlakeleyo olwaziwa ngokuba yi-VFD, edityaniswe no-Count Olaf, abazali bakhe kunye nezihlobo ezithile ezisondeleyo.
Olu luhlu lubaliswa nguLimony Snicket, onikezela umsebenzi wakhe ngamnye kuthando lwakhe lwasemva kwexesha, uBeatriz. Ukususela ekuqaleni umfundi uyacelwa ukuba angafundi ngokuqhubekayo kuba "libali elibi kakhulu." Kodwa injongo yombhali kukunyusa ukufuna ukwazi ngokusebenzisa isindululo.
Uzwilakhe okrelekrele kakhulu
Ukufunda kuya kuba mnandi kakhulu njengoko kubonakala ubunyani buka-Olaf, Kwaye abazalwana baseBaudelaire babonisa ubukrelekrele babo obukhulu ekusombululeni i-enigma nganye ebalulekileyo ukuze baphumelele phakathi kweemeko ezimdaka, zizele ngamaqhinga nezixhobo ezinokubulala.
Uburharha obumnyama ebusweni
Ngendlela yokubalisa ngeziganeko, iimpawu zoburharha obumnyama kunye nokugxeka ziqhelekile. Kunye nezinto ezingabalulekanga ezibhekisa kwinkcubeko nakwincwadi zoncwadi ezibonakalayo zesimbo seGothic. Ngesi sizathu, uthotho lweentlekele ezihlelwe yintlekele ziye zahlelwa njenge-saga yemibhalo ebhalwe emva kwexesha langoku.
Indaleko ye le mpikiswano iphonononga (icebisa) inkqubo yengqondo yotshintsho ukusuka kubuntwana obungenabungqina kunye nobumsulwa ukuya kubunzima bokuziphatha. Ngenxa yoko, indlela yokujongana nemicimbi entsonkothileyo yokungaqondakali kokuziphatha kunye nokungafani kwengqondo, ibonisa ukuba ezinye zezenzo ezenziwa ngabazalwana baseBaudelaire kunzima ukuziqonda.
Umfundi uchukunyiswa ngobuqili ukuba acamngce rhoqo ngokucoceka kokuziphatha kwabo bonke abalinganiswa abakhoyo kule saga. Ekugqibeleni, umbalisi ufuna ukubandakanya abamkeli bakhe kunye nembono yakhe ngebali, azivakalise njengecala elilungileyo lebali.
Umbhali uDaniel Handler.
Nguye umbalisi webali liphela (uthetha kwixesha elidlulileyo) «malunga nemfihlakalo ebangel 'umdla nephazamisayo eyenzekileyo«. Ukwangumcuphi ofumana iinyani ezijikeleze abazalwana baseBaudelaire. Ukongeza, embindini webali kuyatyhilwa ukuba naye wafumana ingozi ngelishwa lakhe elidlulileyo.
Ungumgcini webhanki kunye nomcebisi wezezimali kusapho lakwaBaudelaire. Emva kokusweleka kwabazali, ushiyeke noxanduva lokukhetha umntu oza kubagcina ngokusemthethweni. Kodwa ubuntu bakhe bokugxotha bumkhokelela ekubeni athathe ukhetho olunzima kakhulu kuye ... Bala u-Olaf.
Ungudade osele ekhulile onobuchule. Amandla akhe okudala angenasiphelo amvumela ukuba aqokelele nawuphi na umatshini, isixhobo okanye isixhobo esivela kwizinto ezitsala umdla wakhe.
"Ungumzalwana ophakathi," umfundi okhutheleyo onengqondo ephezulu kakhulu. Ndiyabulela ekuthini kwakhe abe nolwazi, uyakwazi ukufumana isisombululo esifanelekileyo kwiimfihlakalo ezininzi ekufuneka ajongane nazo iiBaudelaires.
Ungumntwana othandekayo "olumayo". Uyakuthanda ukuntywila ngamazinyo akhe kuyo nayiphi na into, kokukhona yomelele ngakumbi. Akukho nto ayinakuphula ngamandla amazinyo akho.
Ungumntu ozingcayo, ogulayo, obandayo, obalelayo, onobuqhetseba nonoburhalarhume. Ucinga ukuba uyinkwenkwezi njengemvumi kunye nomlingisi, kodwa enyanisweni ulousy. Ngenxa yoko, uhlala uswele imali yokwenza iiprojekthi zakho. Ke yena akalibazisi ukubhenela kubutyebi beenkedama zaseBaudelaire njengesixhobo sokwakha indawo yemidlalo yeqonga nokwandisa udumo lwenkampani yakhe.
Quote nguDaniel Handler-Frasesgo.com.
Isimilo sika-Olaf sokugxeka kunye nesokuziphatha sinokubothusa abafundiUngasathethi ke ngolwimi oluntsonkothileyo nolucokisekileyo olusetyenziswa ngabo baphambili. Ngesi sizathu, kufuneka uhlale unomdla kwikota nganye kunye ne-pun ebonakala kwisiqwenga (ngaxa lithile zonke ezo ngcinga zichazwe kakuhle).
Ngamafutshane, Uthotho lweentlekele ezimbi inawo onke amanqaku ahlukileyo omsebenzi onegalelo eliphezulu kwinkcubeko. Umbhali, uDaniel Handler, ubonakalisa iintlobo ngeentlobo zemithombo yolwazi ebhalwe kwisitayile sokwenene esibonisa izinto ezintle ezinjengokuthembeka, ukuxhotyiswa ngengqondo kunye nokuyila.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Uthotho lweentlekele ezimbi
Edgar Allan Poe, ilizwi loxinzelelo
Iindaba ezi-7 zokuhlela ngoSeptemba. I-Biography, i-comic, inoveli ...